I-Ultrasonic Precipitation yeCurcumin Superparticles - Hielscher Ultrasound Technology
Njengoba i-turmeric iqukethe kuphela u-2-9 wt% we-curcuminoids, isizinda esisebenzayo noma ama-synthetic technique kuyadingeka ukuthola i-powder enamandla kakhulu.
I-Ultrasonically yasiza i-antisolvent precipitation iyindlela ephumelelayo kakhulu yokwenza izinhlayiya ze-curcumin.
I-ultrasonic antisolvent precipitation ingenziwa kalula-ukukhiqizwa kwezinto eziningi ze-curcumin ephezulu.
I-Curcumin, i-polyphenol, iyisidakamizwa esingencibilika kwamanzi esitholakala ku-herbal spice turmeric (I-Curcuma longa). I-antioxidants enamandla kakhulu futhi iyaziwa ngamaphilisi ayo anti-inflammatory, anti-cancer, anti-fungal, nama-antimicrobial. Ikakhulukazi ngobubanzi bayo bemisebenzi ye-chemo-yokuvimbela kanye neye-chemo-therapeutic, i-curcumin isetshenziswe njengesakhi sezidakamizwa ezikhethwayo.
Njengoba i-antioxidant enamandla kakhulu, i-curcumin yandisa umsebenzi we-serum we-antioxidants njenge-superoxide dismutase (i-SOD) futhi ihlambalaza futhi ingathathi hlangothi ama-radicals amahhala afana ne-reactive oxygen ne-nitrogen (ROS no-RNS). Ngaphezu kwalokho, kuthuthukisa umsebenzi we-enzyme yomzimba womzimba. I-Curcumin yaziwa nangokuthi izifo zenhliziyo eziphansi futhi zithuthukisa ukusebenza kobuchopho. Ngenxa yalezi zakhiwo zokwelapha eziwusizo eziningi, i-curcumin isetshenziswa kabanzi njenge-spice, isilwane kanye nemithi.
I-Ultrasonic Liquid Antisolvent Ukwehliswa
I-ultrasonically-asstisted liquid antisolvent (LAS) imvula iyindlela elula futhi ephuthumayo yokubambisana ekuqaleni ukukhiqiza i-curcumin nanoparticles ene-orthorhombic superstructure. I-ultrasonic anti-solvent precipitation iyinqubo elula, esheshayo neyinkimbinkimbi, evumela ukuthi kuncishiswe i-curcumin ephezulu kwi-pharma kanye nemboni yokudla.
Indlela yokwenza ama-curcumin superparticles ngokungabi khona kanye nokutholakala kwe-ultrasound ngaphandle kokuqiniswa. Isithombe © 2014 Thorat et al.
I-Ultrasonic Precipitation Protocol:
Ngenxa yokwehliswa kwe-ultasonic yezinhlayiya ze-curcumin, isisombululo se-curcumin e-ethanol (5 mg / mL) senezelwa emanzini angu-100mL aqukethe i-surfactant (0.02 wt% emanzini) noma ngaphandle kwe-surfactant. Njengesikebhe esabelayo, isitsha seglasi esibucwebe esincane. Umthamo we-500mL, ububanzi buka-7cm kanye nenani le-L / D lika-1.7 lisetshenzisiwe. Ukushisa kwenhlanganisela kugcinwa njalo ku-1ºC. Ukuze i-ultrasonic precipitation inqubo, i-sonotrode ye-homogenizer ye-ultrasonic efana ne- UP200Ht noma UP200St ifakwe i-sonotrode ye-S26d14 igxila engxenyeni ye-solvent-antisolvent. Ku-100% yamapulitude setting kanye no-10min. sonication, ingxube yahlakazeka.
Isikhathi sonication sivumela ukuphathwa kwe polymorphism of amakristalu cucrcumin. Lapho isikhathi sonication sisetshenziswa, iphesenti ye-orthorhombic izinhlayiya zanda. Lokhu kubonisa ukuthi ukwanda kwamandla e-ultrasonic kusiza ukwakheka kwefomu le-orthorhombic phezu kwefomu le-monoclinic, kungakhathaliseki ukuthi isithasiselo esisetshenzisiwe.
I-UIP1000hdT – I-1kW iprosesa ye-ultrasonic ye-precipitation ye-API
Ukuthuthukiswa kwe-Bioavailability nge-Ultrasonic Encapsulation
Njengoba i-curcumin i-lipophilic molecule futhi ingaxoliswa kabi emanzini (= hydrophobic), ine-low-biovailability systemic ephansi. Ngakho-ke, kubalulekile ukulungiselela ama-curcumin formulations okwenza ngcono ukutholakala kwawo. Ukuze kulungiselelwe izixazululo ezinama-curcumin, ama-surfactants, lipids, i-albumins, i-cyclodextrins, i-biopolymers njll zengeziwe ukuze zifakwe ngaphakathi noma zilayishe ama-molecule we-curcumin kuma-liposomes, ama-nanoparticles nezinye izidakamizwa.
I-ultrasonication iyindlela ephumelelayo kakhulu futhi ethembekile yokwakha iziphathimandla zezidakamizwa ezifana Liposomes, i-core-shell nanoparticles, biopolymers kanye emulsions kabili! Thola ngezansi iphrothokholi ye-ultrasonic encapsulation ye-curcumin.
I-Ultrasonic Curcumin Encapsulation Protocol:
Ama-nanoparticles ama-polylactic-co-glycolic acid (i-PLGA) alayishwe yi-Curcumin
Okokuqala, i-polga ye-PLGA ichitheka e-ethyl acetate. I-Curcumin (15% w / w) yengezwe futhi ivumelekile ukuba ichithe ngenkathi ikhipha isisombululo ngokuzenzekelayo.
Ingxube eqinile-in-amafutha yengezwe esigabeni esimnandi se-PVA (w / v) ukwakha ummoya we-SO / W. Khona-ke, isixazululo sezidakamizwa / i-polymeri e-PVA sithinteka ku-8,000 rpm.
Isisombululo esiphelele sihanjiswa nge-approx. 300sec at 45% amplitude nge homogenizer ultrasonic efana UP200Ht noma UP200St (200W, 26kHz). Ngokushesha ngemva kokuzalwa kwe-sonication, i-emulsion isetshenziselwa isigaba se-aqueous (0.1% PVA emanzini; 200mL) ngokusabalalisa ngaphansi kokugqugquzela okusheshayo nge-stirrer magnetic.
Ukumiswa kwe-colloidal kuqhutshwa njalo nge-stirrer magnetic kuze kube sekuqedeni ukuphuma kwe-solvent. Khona-ke, i-nanoparticles iqoqwe yi-centrifugation, igeze izikhathi ezingu-3 nge-distilled Milli Q amanzi. Okokugcina, baphinde baphinde basetshenziswe kwisisombululo se-cryoprotectent (sucrose (2% w / w) ne-trehalose (5% w / w)), yomiswe ohlelweni lwe-lyophilizer ATR FD3.0 futhi lungagcinwa ku-4 ° C okungenani izinyanga ezingu-6 .
Ama-Ultrasonic Processors we-Curcumin Ukwehliswa nokuqalwa
I-Hielscher Ultrasonics inikeza imishini ephakeme ye-performace ultrasonic ye-synthesis ye-nanoparticles (isib. APIs) kanye nesisetshenziswa sama-botanical compounds. Ibanga lomkhiqizo wethu liqukethe ibhodi eyinkimbinkimbi, ibhentshi phezulu nama-ultrasonicators zezimboni, okuvumela ukuthuthukiswa kwezinhlelo zokusebenza kusuka ezincane kuya ezentengiselwano. Yonke imiphumela etholakalayo ebhodini nokuhlolwa kwe-pilot ingaba yinkimbinkimbi eqondile yezinga lokukhiqiza ezentengiselwano. Zonke izinhlelo zakhiwe ngomsebenzi we-24/7, oqinile, futhi olula ukuyisebenzisa.
Uchungechunge lwe-UIPxxxxhdT luhlanganisa izinhlelo zethu zezimboni ze-ultrasonic, ezingasetshenziselwa ibhentshi-phezulu, inqubo yokusebenza kanye nokukhiqizwa kwezimboni. Izinhlelo zethu zezimboni zikhona njengoba 500W (UIP500hdT), 1000W (UIP1000hdT), 1500W (UIP1500hdT), 2000W (UIP2000hdT), 4000W (UIP4000hdT), 10,000W (UIP10000) futhi 16,000W (UIP16000, i-ultrasonicator enamandla kunayo wonke umhlaba). Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic yezimboni angasebenza ngokuqhubekayo 24/7 kuma amplitudes aphezulu kakhulu angafika ku-200μm. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-Hielscher inikeza nge-ultraotic ultrasonic sonotrodes. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza okuthembekile okuzungezile-kwe-clock emsebenzini obunzima nasezindaweni ezinzima.
Kuzo zonke izinhlelo zethu ze-ultrasonic, sinikeza inqwaba yezinsiza ezifana ne-sonotrodes, izimpondo ze-booster, ukugeleza kwamaseli kanye nezigameko zamasayizi amaningi, ubujamo nama geometri. Ngamathuluzi, kuba lula ukuvumelanisa ama-processors ethu e-ultrasonic ngokufanele emibandela yezinqubo ezidingekayo.
Ukuze uthole imvula kanye nokwaziswa kwangaphakathi-up, i-Hielscher inikeza ukufaka okuyingqayizivele kweseli yeseli – I MultiPhaseCavitator MPC48. Nge-MultiPhaseCavitator, isigaba sesibili (anti-solvent) sijojowe ngama-canulas ama-48 ngokuqondile endaweni ye-ultrasonic cavitation, lapho ixubene khona ngaphakathi kwe-milliseconds ibe isigaba sokuqala. Njengomphumela, ama-nano-izinhlayiya ezihambisanayo aphelile.
Sonication enamandla kusuka ebhodini kanye nebheke-phezulu ekukhiqizeni izimboni.
Ama-Hewlings, i-SJ; Kalman, DS (2017): i-Curcumin: Ukubukezwa Kwendlela 'Imiphumela Yomuntu Wezempilo. Ukudla. 2017 Oct; 6 (10): 92.
I-Thorat, i-AA; I-Dalvi, i-SV (2014): Izindlela zokubunjwa kwama-particle kanye ne-polymorphism ye-curcumin ebangelwa i-ultrasound nezithasiselo ngesikhathi se-liquid antisolvent precipitation. CrystEngComm, 2014, 16, 11102-11114.
I-Ranjan, i-AP; Mukerjee, A .; Helson, L .; Vishwanatha, JK: (2012): Ukulinganisela phezulu, ukuhlaziywa nokuhlaziywa kokuzinza kwe-Curcumin C3 eyinkimbinkimbi-nanoparticles elayishiwe yokwelapha umdlavuza. Journal of Nanobiotechnology 2012, 10:38.
I-Curcumin iyinhlanganisela yamakhemikhali ephuzi etholakala ku-turmeric. I-Turmeric iyisitshalo esihlala isikhathi eside esiyi-rhizomatous (i-rbazomatous herbaceous plant)I-Curcuma longa) emndenini we-ginger. I-Curcumin i-polyphenol ekhishwa kuma-rhizomes futhi asetshenziselwa kakhulu njenge-spice. Kuye ngokuthi imvelaphi yayo kanye nezimo zenhlabathi lapho ikhule khona, i-turmeric iqukethe 2% -9% i-curcuminoids. I-Curcumin yi-curcuminoid esemqoka ye-turmeric (I-Curcuma longa, i-Zingiberaceae). Isetshenziselwa ukwesekwa, ukwakhiwa kwemithi yokwelapha, ukudla okunambitheka kokudla okunambithekayo kanye nesithako sezimonyo.
Ifomu elihlanzekile le-curcumin, eliqukethe kuphela izingxenye ezintathu ezilandelayo – i-curcumin, i-bisdemethoxycurcumin ne-demethoxycurcumin – kubuye kuthiwa yi-curcumin C3 complex. I-curcumin ehlanzekile ingahlukaniswa no-C3 mix of curcumin, i-bisdemethoxy curcumin ne-demethoxy curcumin nge-column chromatography.
Ngokuphathelene nezakhiwo zalo zokwelapha, i-curcumin ehlanzekile, engaguquki inenkinga enkulu: Ngenxa yokungabi namanzi okunethezeka kwamanzi futhi ngaleyo ndlela i-bioavailability engenakho, i-curcumin engakahleleki ayikwazi ukufakazela imiphumela yayo yokwelashwa, kodwa isheshe isetshenziswe esibondweni sesibindi namathumbu emathunjini. Ukuze unqobe izinga lokunciphisa eliphansi le-curcumin, ama-molecule asebenzayo ahlanganiswe nakubathwali be-nano (isb Liposomes, nanospheres) noma ilayishwe kwi-nano-complexes (isb nanoparticles, izingxube ze-phospholipids, i-cyclodextrins nokuhlakazeka okuqinile). Ngaphezu kwalokho, i-bioavailability ye-curcumin inganyuswa ngo-approx. 2000% lapho umthamo wayo uhlanganiswa ne-piperine, okukhishwa ngamnyama.
Ngenxa yala maqiniso, i-curcumin e-form (nanocurcumin) yindlela ekhethwa ngayo ye-curcumin kusukela i-curcumin i-nanoform inqoba izinkinga ezikhulunywa ngazo ezidakamizwa. I-Nanocurcumin ingafaka impahla yayo yokwelashwa ngenxa yokulethwa ngcono kwezicubu ezigulayo, ukuqeqeshwa okungcono ngaphakathi nokunciphisa ukuchithwa kwesistimu.
I-Curcumin iyatholakala kumafomu amaningi okulethwa okuhlanganisa ama-powders, ama-capsules, amaphilisi, amafutha okuphuza, iziphuzo zokudla okunomsoco kanye nezikhwama zezimonyo.
Izicelo zezokwelapha ze-Curcumin
UClorcumin uphenywe ngokubanzi ngezinhlobo zayo zokusebenzisa eziningi emithi kanye nokudla. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-curcumin inomsebenzi ophezulu we-antioxidant, okwenza ukuba i-apoptosis yeselula, ivimbele ukusabalala kwe-cell, ukunamathela kwesilwane kanye ne-motility, futhi inikeza izindawo zokulwa ne-angiogenesis nezindawo eziphikisana namagciwane. Ngenxa yale miphumela, i-curcumin isetshenziswa njengesidakamizwa ukuphatha izifo ezihlukahlukene zokuvuvukala, amagciwane, izifo ezingenayo i-neurodegenerative, izifo zenhliziyo kanye nesifo sikashukela.
Amafomu ama-ultrasonically alungiselelwe ama-nano-management I-curcumin yokwelashwa kwezokwelapha ihlanganisa nanoparticles, liposomes, micelles, nanoemulsions, cyclodextrin complexes, nanodisks, nanofibres, lipid eqinile lipanticles, kanye curcumin conjugates. Lezi zindlela zama-nano-scale zenza ukunqotshwa kwe-bioavailability ye-curcumin empofu futhi kuvumela ukulethwa okubhekiswe futhi okuphumelelayo kwesidakamizwa se-curcumin enamandla kakhulu.
Isakhiwo seClorcumin Chemical
I-Curcumin iyi-molecule ehambisanayo, eyaziwa ngokuthi i-diferuloyl methane. Igama le-IUPAC le-curcumin (1E, 6E) -1,7-bis (i-4-hydroxy-3-methoxyphenyl) -1,6-heptadiene-3,5-dione, ene-formula yamakhemikhali C21H20O6. Amakhekhe e-Curcumin angabonakala ngezimo ezahlukene, njenge-monoclinic (acicular), orthorhombic (okusanhlamvu okusanhlamvu kufana), nesimo sama-amorphous.